December 3, 2021 – Facebook Khabar
काठमाडौं । किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रू. १२५ मा १२ लाख ९८ हजार २५९ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ [ … ]
बजार जानकार भन्छन्–‘ढुक्क हुनुहोस्, बजारले छिट्टै अलटाइम हाई ब्रेक गर्छ’
काठमाण्डौ । सेयर बजार ३२०० को विन्दुबाट निरन्तर घट्दो क्रममा छ। बजार घटेसँगै दैनिक हुने कारोबार ३–४ अर्बमा खुम्चिन थालेको छ। अहिले अधिकांश लगानीकर्ता बजारमा के गर्ने ? कस्तो लगानी [ … ]
लगानीकर्ताको नजरमा सेयर बजार बढ्ने आधारहरू
काठमाडौं- सेयर बजार लगातार तल झरिरहँदा पनि विश्लेषकहरू आउने सातादेखि सेयर बजारमा सुधार देखिने विश्लेषण गरिरहेका छन्। विगत दुई सातामा सेयर बजार गिरावटका जुन जुन आधारहरू थिए ती सबै कमजोर [ … ]
केहि समय अघि मात्र प्राथमिक शेयर सार्वजनिक गरेको मध्य भोटेशोकीको शेयर आँउदो साता दोस्रो बजारमा कारोबार हुने भएको छ । कम्पनीतले जानकारी दिएको छ । शेयर रजिष्टार ग्लोवल आईएमई क्यापिटलका [ … ]
किन घटिरहेको छ बजार ? नेप्सेको करेक्सनमा कोही चकित, कोही भन्छन् ‘साइडवेजमा’
सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि यो साता सुखद रहेन । यो एक सातामा नेप्से परिसूचकमा १४७.१७ अंकको गिरावट आएको छ । अधिकांश लगानीकर्ताहरुको अपेक्षा विपरित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको [ … ]
महालक्ष्मी विकास बैंकमा के हुँदैछ ? हेर्नुहोस Routine of Share Bazar
काठमाडौं । आज महालक्ष्मी विकास बैंकको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । केही दिन पहिले बजार बन्द हुनु केही मिनेटअघि मात्रै सो कम्पनीको शेयर उच्च कारोबार भई शंकाको घेरामा परेकोमा आज [ … ]
भोलिदेखि सबै विद्यालय यसकारण अनिश्चितकालका लागि बन्द :
काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका सबै विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । बिहीबार दिल्लीका वातावरण मन्त्री गोपाल रायले शहरको वायु प्रदूषण खराब बन्दै गएपछि शुक्रबारदेखि सबै विद्यालय बन्द [ … ]
बिहीबार नेप्सेमा ५० अंकको गिरावट, के मंसिर/पुस भनेको अफ सिजन नै हो ?
facebook - December 3, 2021 December 3, 2021
शेयर बजारमा मौसमी प्रभाव सुरु भएको छ। मंसीर लागेदेखि नै प्रतिकुल देखिन थालेको शेयर बजार मंसीरको मध्यसम्ममा आइपुग्दा थप दबावमा परेको हाे। सबैजसो कारोबारमा सिजनल प्रभावको निक्कै ठूलो महत्त्व हुने गर्छ। [ … ]